Bandow Maalmaha soo socda ka dhaqan galaya jidadka Muqdisho & maamulka G/Banaadir oo ka hadlay - iftineducation.com
iftineducation.com – Maamulka gobolka Banaadir ayaa ku dhawaaqay in labada maalmood ee soo socota la xiri doono dhamaanba wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiinta maamulka ayaa sabab uga dhigay xiritaanka wadooyinka xaflada caleemo saarka Madaxweynaha cusub ee Somalia Maxamed C/llaahi Farmaajo oo 22-ka bishan lagu qabanayo Muqdisho.
“Jidadka waa la xirayaa maalmaha Talaadada iyo Arbacada oo taariikhdu ku beegan tahay 21 iyo 22-ka bishan Febraayo, si loo sugo amaanka maadaama la caleema saarayo madaxweynaha cusub ee dalka” ayuu yiri sarkaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadir.
Wasaarada Gaadiidka cirka iyo dhulka ee dowlada Somalia ayaa iyana horey u sheegtay in maalinta ay dhaceyso xaflada caleemo saarka Madaxweynaha cusub duulimaadyada rayidka ah laga mamnuucay garoonka Aadan cadde.
Wufuud caalami ah oo ay ku jiraan madaxda dalalka geeska Afrika qaarkood ayaa la filayaa iney ka soo qeyb galaan xaflada caleemo saarka madaxweynaha cusub, waxaana illaa hadda la xaqiijiyey iney iman doonaan madaxweynayaasha dowladaha Kenya iyo Jabuuti, iyadoo raisul wasaaraha Itoobiya oo ka mid ah madaxda la casuumay shaki laga muujinayo inuu ka soo qeyb galo xaflada caleemo saarka.